Kitra – Lalao fitsapana : mety tsy ho raikitra ny fihaonan’ny Barea sy i Kaomoro | NewsMada
Kitra – Lalao fitsapana : mety tsy ho raikitra ny fihaonan’ny Barea sy i Kaomoro
Mandalo olana goavana ankehitriny ny baolina kitra ao Kaomoro. Nosazian’ny minisiteran’ny fanatanjahantena any an-toerana mantsy ny federasiona kaomorianina. Manoloana izany, mety tsy ho raikitra ny lalaon’ny Barea sy Coelacanthes.
Naaton’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena kaomorianina, tamin’ny alalan’ny minisitra Mahamoud Salim, ny alakamisy lasa teo, ny federasion’ny baolina kitra any an-toerana. Sazy mampitsahatra ny komity mpitantana, amin’ny asany sy ny tsy fahazoana mikarakara fifaninanana, mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Noho ny fisian’ny kolikoly, teo amin’ny andro farany, amin’ny fifaninanam-pirenena, hamaritra izay ho tompondaka, ny anton’izany. Raha tsiahivina, nitranga ny olana teo amin’ny Volcan Club sy ny US Zilimadju.
Voalaza fa samy nividy ny lalao nifanaovany tamin’ny Elan Club izy ireo, ka nisian’ny isa tataka be, 20 no ho 0 ary 19 no ho 1, izay samy nivoahan’ny roa tonta ho mpandresy. Nambaran’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena nefa fa hosoka izany fihaonana izany, ka nahatonga azy ireo, handray fanapahan-kevitra, hanasazy ny federasiona.
Araka izany, mety tsy ho raikitra ny lalao ara-pirahalahiana eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Coelacanthes. Fihaonana, tokony hotanterahina ny asabotsy 11 novambra ho avy izao, ao amin’ny kianja St Leu La Forêt, région Parisienne, Frantsa.
Hatreto aloha, mbola tsy naharay taratasy milaza ny tsy fisian’ny lalao ny eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Ny mpilalaon’ny Barea de Madagascar rahateo, efa samy nahazo fiantsoana hiatrika ity fihaonana ity avokoa. Araka ny vaovao, nampitain’ny mpanazatra ny Barea de Madagascar, hanomboka ny alatsinainy ho avy izao, ny fampivondronana, ireo mpilalao 19 mirahalahy, izay samy mpila ravinahitra avokoa. Tsiahivina fa handeha mivantana amin’ny fahitalavi-pirenena (TVM), ny fihaonan’ny roa tonta, raha toa ka raikitra soa aman-tsara.